အနော့ အမြင်ကတော့ အနော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဖြစ်သင့်တာ ရှေ့စဉ်နောက်လိုက်မှာ …..
အမြင်မတူတာတွေကိုလည်း ပိတ်ထားလို့ မရပါဘူးး
ဒီထက်ပိုပြီး ဖြစ်သင့် လုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေ စာပေလောကအနုပညာလောက မှာ အများဂျီး မဟုတ်လားနော့။
ကျွန်တော့် အတွေး သက်သက်ပါ (By Lay Lwint Thu)
မလွတ်လပ်တဲ့ တစ်ခေတ် တစ်ချိန်က အတားအဆီး ပိတ်ဆို့မှု များစွာနဲ့ ..စာပေလည်း မဖွံ့ဖြိုး .အနုပညာလည်း မတိုးတက် … အဘက်ဘက်က နိမ့်ကျသပေါ့ လေ ……
လူတိုင်းလည်း ပြောကြ …ကျွန်တော်လည်း အဲသလိုပဲ ယုံကြည်မိပါတယ် … ဘာလို့ ပိတ်ထားသလဲ အားလုံး ဖရီးဒမ်း … ဒါပဲပေါ့ ……………..
ဟော ခုတော့ လွတ်ပြီ ကျွတ်ပြီ အားလုံး ဖရီးဖြစ်ပြီလည်း ဆိုရော …….
ဂျာနယ်တစ်ချို့ မျက်နှာဖုံးကအစ … မိသားစု မဖတ်ရဲဘူး …
အင်တာနက် စာမျက်နှာ … နားမလည်တဲ့ အမေ့ကို သင်ပြ ပေးချင်တာတောင် သင်မပေးရဲဘူး …
ပလူပျံ နေတဲ့ အတားအဆီးမဲ့ ဓာတ်ပုံ တွေ………..
အတားအဆီးမဲ့ စာသားတွေ ………
အရင်က TV ကြည့်ရင် ပျင်းစရာကောင်းပေမယ့် စံပြု နိုင်သော ရုပ်သံ အစီ အစဉ်တွေ ကနေ အခု ကြည့်ဖြစ်ရင် … ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ဆိုပြီး … ဒလဟော သွန်ပြ နေတဲ့ ခေတ်ပေါ် အကြောင်းအရာတွေ …. သီချင်း သီချင်း လာနေတယ် ဆိုတိုင်း ..မိသားစု ထိုင်ကြည့်ဖို့တောင် မသင့်တော်တော့တဲ့ .. အစီအစဉ်တွေ ……
အနှစ်သာရမဲ့ ရန်လိုခြင်း သက်သက် ပုံ၇ိပ်တွေ စာသားတွေ ……..
တော်လှန်သော သဘောတရားတွေ … အကျဉ်းထောင် သူရဲကောင်းတွေ …
ဒါက ကျွန်တော်တို့ အရင်က ထင်ခဲ့သလို ..လွတ်လပ်သွားလို့ ..တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာ သလား ဆိုတာ သေချာပြန်စဉ်းစားမိတယ် ….
နေရာတိုင်းမှာ အကန့်အသတ် စည်းဘောင် ဆိုတာ အပြင် အခြေအနေနဲ့ အချိန် အခါ ဆိုတာလည်း ရှိပါသေးတယ် ….. ပြီးတော့ လူတိုင်းလိုက်နာရမယ့် လူမှု စည်းကမ်း တွေအပြင် .. ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တစ်ဦးချင်းဆီမှာ ရှိရမယ့် သက်ဆိုင်ရာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အက်သစ် တွေလည်း ရှိပါတယ် ……. လွတ်ပြီကွ ဆို အကုန် လွတ် ပစ်လို့ တော့ မရပါဘူး …စည်းနဲ့ ဘောင်နဲ့ အက်သစ် နဲ့ လွတ်ကြရင် ပိုကောင်းမှာပါ ………….
တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိဘူး ဆိုတာ .. မတရားခံရတဲ့ အမှုတွေ ရှိနေမှ မဟုတ်ပါဘူး.. ပြဠာန်းထားတဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနဲ့ မလုပ်ပဲ .. လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို မလုပ် ..မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တာကို ၀န်ထမ်းတွေ လုပ်ရင်လည်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိတာပဲ ….. ဒီလိုပဲ … လိုက်နာသင့် လိုက်နာအပ်တဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ကျင့်ဝတ် တွေကို မလိုက်နာပဲ နေရင်လည်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု မရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်တာပါပဲ …….
တည်ဆောက်ရေးနဲ့ တော်လှန်ရေး မကွဲပြားဘူး ဖြစ်နေကြတုန်းပဲ ……..
အရှေ့ကို သိပ်ကို ကျော်ပြီး လှမ်းခြင် ကြတုန်းပဲ ……
ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်ခြင်း ဆိုတာ ..အမေရိကန် ပုံစံလည်း ပုံတူ ကူးလို့ မရပါဘူး
ထိုင်း ပုံစံကိုလည်း ပုံတူး ကူးလို့ မရပါဘူး …
နေရာတိုင်းမှာ ဥရောပ ပုံစံနဲ့ မြင်လို့လည်း မရပါဘူး
လူ့အခွင့်အရေးပေတံ ဆိုပြီးလည်း နေရာတိုင်းကို လိုက်တိုင်းနေလို့ မရပါဘူး … လူ့အခွင့်အရေး ပေတံနဲ့ ထူထောင်ခါစ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို တိုင်းကြမယ် ဆိုရင် .. အဲဒီ လူ့အခွင့်အရေး ပေတံ စံနှုန်း ဆိုတာကရော ဘာနဲ့ စံပြု ထားသလဲ လို့ ပြန်မေးချင်စရာပါ ..
ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုး ..ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်သော ကျင့်ဝတ် အပြည့်ဖြစ်သော လူမှု အသိုက်အ၀န်းကို အစွန်း ကင်းကင်း ထူထောင် နိုင်ခြင်းသည်သာ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ခြင်းပါပဲ ..
အိုးး.. သူများ Sexy ကိုယ် Sexy ပေါ့ ဆိုပေမယ့် ဒီတိုင်းပြည်မှာ လူနည်းစုကြီး သိပ်ကြိုက်ပါတယ် ဆိုရင်တောင်မှ လူများစုကြီးသည် .. ယဉ်ကျေးမှု အရ ..ဒါဟာ ရှက်စရာ ကောင်းတယ် ဆိုတာ လက်ခံ ယုံကြည်ထားပါတယ် ဆိုတာ မေ့မထား သင့်ပါဘူး ……..
… ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး .. ပညာမြင့်မားရေး ..စီးပွားရေး ခိုင်မာရေး .. ငွေကြေး တည်ငြိမ်ရေး ဆိုတဲ့ စကားတွေ အသံတွေ စာသားတွေ အစီအစဉ်တွေ ကျွန်တော်တို့ ..အခု ထူထောင်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ ကာလမှာ ..ကြားဆို တိုးတိုးတောင် မကြားရပေမယ့် …….
အတိတ်ကို စာရင်းရှင်း နေတာ
စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လွတ်ချင်တိုင်းလွတ်နေတာ
အတော်လေးကို ကြာခဲ့ပြီ ……
(Lay Lwint Thu)
အဲ့ဒီလိုစာအုပ်တွေအပေါ် ကျနော့်သဘောထားပုံနဲ့ ကွက်တိပဲ
စာကြမ်းပိုး တွေပြောသမျှ အကုန်လက်ခံပါတယ်..သဘောတူမျှပါတယ်..
တစ်ပူးကတော့ အချွန်နဲ့ မနေဘီ …
အဲ့ အောင်ယင်ငြိမ်း တို့ ဇွန်တင်ချာ တို့ မေညတ်မွန် တို့ ဆာဆာထက် တို့ ထောင်ကျကုန်ရင်
ခီညားတို့ ကို ကျော် …စန္ဒာပြမယ်…
လွတ်​လပ်​သည်​ဆို​သော်​လည်း…….( ​နေ၀န်းနီရဲ့ သ​ဘေထား )
စာ​ပေလွတ်​လပ်​ခွင့်​ မရခင်​တုန်းက ဘယ်​သူ့ ကဗျာ ဆင်​ဆာထိလို့ ဘယ်​သူဝတ္ထု ကဖြင့်​ ထုတ်​​ဝေခွင့်​မရလို့ စသည်​ဖြင့်​ ကြိုးကြားကြိုးကြား ကြား​နေရတာက မကြာခဏ ဆိုသလိုပင်​ ။ စာေ​ပလွတ်​လပ်​ခွင့်​ ရပါပြီတဲ့ ။ ကြား​နေကြအသံ​တွေ တိတ်​သွား​ပေမဲ့ ​ဖောက်​ထွက်​လာတဲ့ စာ​ပေ မ​တွေ့ရပြန်​ဘူး ။ ရလာတဲ့အခွင့်​အ​ရေး အပြည့်​အ၀ အသုံးချသွားနိုင်​တာက ” ဂျာနယ်​ ” ​တွေပဲဖြစ်​တယ်​။ စာ​ပေသမား​တွေ ဘက်​က လွတ်​လပ်​ခွင့်​နဲ့ အတူ အဆင့်​မြင့်​ အနုပညာ​တွေကို လွတ်​လွတ်​လပ်​လပ်​ မဖန်​တီးကြ​သေးဘူးလို့ ကျ​နော်​မြင်​တယ်​ ။ သီချင်း ရုပ်​ရှင်​ဘက်​မှာလဲ ဒီအတိုင်းပဲ လွတ်​လပ်​ခွင့်​ကို Sex ဘက်​မှာ ပိုပြီး အခွင့်​အ​ရေးယူလိုက်​ကြတာပဲ ။ တစ်​ကယ်​​တော့ ရရှိတဲ့ လွတ်​လပ်​ခွင်​ဟာ လက်​ရှိ အနုပညာဖန်​တီးသူ​တွေနဲ ထိုက်​တန်​မှု​ကော ရှိရဲ့လား စဉ်းစား စရာဖြစ်​​နေတယ်​ ။ ဒါက ဘယ်​​နေရာမှာ ဘာမှမဟုတ်​တဲ့ မြန်​မာ့ အနုပညာကို ချစ်​တဲ့ ပြည်​သူတစ်​ချို့ရဲ့ ခံစားချက်​ပါ။။ ကျ​နော်​တို့က ယဉ်​​ကျေးမှု ဓ​လေ့ ထုံးစံရဲ့ ထွက်​​ပေါက်​မရှိတဲ့ စည်းဝိုင်းထဲမှာ ပိတ်​မိ​နေလို့ ဒီ လိင်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ အနုပညာကို လက်​မခံတာမဟုတ်​ပါဘူး ။ ကျ​နော်​တို့တစ်​​ယောက်​ချင်းစီမှာ လက်​ခံနိုင်​မဲ့ အရည်​အ​သွေး စည်းကမ်းမပြည့်​ဝ​သေးလို့ ထုတ်​လုပ်​ဖို့​စော​နေ​သေးတယ်​လို့မြင်​လို့ပါ ။ စည်းကမ်းကျန​သော ဒီမိုက​ရေစီဆိုတာကလည်း အ​ပြောပဲ ရှိ​နေ​သေးတယ်​ ။ လုပ်​​တော့ ​စောက်​တစ်​လွဲ ဆိုတဲ့ အချိန်​မှာ ​စော​စောက ​ပြောတဲ့ Sexural Article လို့​ပြောမလား ။ လိင်​ပိုင်းဆိုင်​ရာအနုပညာ​ပေါ့​လေ ။ အဲ့ဒါကို သွားင်္ပြီး လက်​သင့်​ခံလို့မဖြစ်​​သေးပါဘူး ။ ဒီမိုက​ရေစီရင့်​သန်​ပြီးသား နိုင်​ငံရပ်​ခြား တိုင်းပြည်​​တွေနဲ့ သွားပြီး ခိုင်း နှိုင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ ဦး ။ သူတို့​တွေဆီမှာ စည်းကမ်းသား ပြည့်​ဝပြီးသား ကျ​နော်​တို့ဆီမှာက မလုပ်​ရဘူးလို့တားမြစ်​ထားရင်​ ခိုးပြီး လုပ်​ချင်​တဲ့ အကျင့်​က အရိုးစွဲ ​နေပြီးသား ။ အသက်​ ၁၈ ​အောက်​ မဖတ်​ရလို့ သတ်​မှတ်​ထားလို့ ၁၈ နှစ်​​အောက်​က ​ရှောင်​သွားမယ်​ ထင်​သလား ။ လူမြင်​သူမြင်​ မဖတိရရင်​ ခိုးဖတ်​မှာပဲ ။ အဲ့စည်းကမ်း ​ဖောက်​ဖျက်​လို့ တရား ဥပ​ဒေမှာ ခိုင်​ခိုင်​မာမာ ပြဌာန်း​ပေးထားတာ တိတိကျကျ အ​ရေးယူတာ​တွေ ရှိ​နေပြီလား ။ ​ဆေးလိပ်​နဲ့ အရက်​မှာ ​တောင်​ ၁၈ နှစ်​​အောက်​​တွေ အတွက်​ ထိမ်းသိန်း ရခက်​​နေတာ ​နောက်​တစ်​မျိုးတိုးလာရင်​ ………. ။ တစ်​ချို့က ​ပြောကြဦးမယ်​ ။ ၀တ္ထု ဖန်​တီးတာက အပြင်​မှာ ရှိလို့ လက်​ရှိဖြစ်​ပျက်​​နေတဲ့ အ​ပေါ်မှာ ခံစားမှုနဲ့ ဖန်​တီးတာပါလို့ ။ အဲ့သလိုသာ အပြင်​​လောက မှာ ရှိသမျှ ဖန်​တီးကြ​ကြေးဆို အွန်​လိုင်း​ပေါ်က အပြာ ​လောကက စာ​ပေနယ်​မှာ ​နေရာရလာတာ ကြာ​ပေါ့ ။ တစ်​ချို့စာအုပ်​​တွေဆိုရင်​ မြန်​မာပြည်​မှာ လက်​ရှိ​ရေး​နေတဲ့ စာ​ရေးဆရာ​တွေ သနားတယ်​လို့ ​ပြောရ​အောင်​ ဇာတ်​လမ်းဆင်​ပုံ အကွက်​ချပုံ ​ကောင်းတယ်​ ။ ဘာ​ကြောင့်​များ ဒီ​လောကထဲ​ပျော်​​မွေ့​နေရသလဲလို့ နှ​မြော​လောက်​​အောင်​​ကောင်းတယ်​ ။ သူတို့​တွေ ဘာ​ကြောင့်​ အပြင်​ကို ထွက်​မလာလဲ ။ ရှင်းတယ်​ ။ လူ့ယဉ်​​ကျေးမှု အပြင်​ဘက်​​ရောက်​​နေလို့တဲ့ ။ ယဉ်​​ကျေးမှု အပြင်​ဘက်​​ရောက်​​နေတဲ့ ကိစ္စ ။ တစ်​ကိုယ်​​ရေ ခံစားမှုသက်​သက်​ ဖန်​တီးမဲ့ အနုပညာ အများစုအတွက်​အဆိပ်​အ​တောက်​ ဖြစ်​မဲ့ အနုပညာဆ်ုိရင်​​တော့ဆန့်​ကျင်​ရမှာပဲ ။ ခင်​ဗျားတ်ို့​ပြော​ပြော​နေတဲ့ ​အောင်​ငြ်ိမ်းဖြစ်​ဖြစ်​ သူ့အ​ဖေဖြစ်​ဖြစ်​ အဲ့ဒါ ​နေ၀န်းနီ ရဲ့ သ​ဘောထားပဲ ။
ဆာကြက်ဖိုးတစ် ပြောသလို မိုးဇေငြိမ်းရဲ့ ဘာလဲဟဲ စွမ်းအားရှင် စာအုပ်ကြတော့ စာပေစီစစ်ရေးက ခေါ်ပိတ်တယ်.. အောင်ရင်ငြိမ်း စာအုပ်ကြတော့ ဖွင့်ပေးထားတယ် ဆိုကထဲက ရှင်းပါတယ်… တမင်ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိနဲ့ လွှတ်ပေးထားတာပါ။ မြန်တျန့်ပြည်ကို ထောက်လှမ်းရေး ကွန်ယက်နဲ့ အုပ်ချုပ်ထားတာ.. ဗိုခင်ညွှန့်လက်ထက်က အတိုင်းပဲ။ အခြေအနေအရ မဖမ်းဆီးဘဲ လွှတ်ပေးထားတာပဲရှိတယ်။ ကျန်တာတော့ မှတ်တမ်းအကုန် ရှိပြီးသား.. ဘယ်သူ ဘာလုပ်နေလဲ သိပြီးသား၊ အန်အယ်လ်ဒီနဲ့၈၈က လူထုလှုပ်ရှားမှု လုပ်ချိန်မှာ ဒါမျိုးတွေနဲ့ လမ်းလွှဲချင်မှာပဲ။ အပြာစာပေ သင့်မသင့် ဆိုတာထက် ပြသနာက မြန်တျန့်ပြည်ရဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ ပြဌာန်းပြီးသား တပုံဂျီး.. အဲဒါတွေ ဘယ်လို အသက်ဝင်အောင် လုပ်မလဲ စိုးရိမ်စရာရှိတယ်။ ဥပမာဗျာ ဆေးလိပ် အရက် ၁၈နှစ်အောက် မသောက်ရ တားမြစ်ထားတာပဲ၊ သိနေရမှာပဲ ဆင်ခြေပေးလို့ မဖြစ်ဘူး။ ဥပဒေထုတ်ထားပေမဲ့ လိုက်နာမှုရှိအောင် ဘယ်လိုစီမံမလဲဆိုတာ အခရာကြတယ်။ ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ ဦးသိန်းဂိန်အစိုးရရဲ့ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက် တခုမျှသာပါပဲ။ လှည့်တိုင်းရတဲ့ မြန်တျန့်တွေကတော့ တောင်ကြ ခံဂျပေါ့..
ကျွန်မ မနေ့ က ပွဲ တစ်ခု မှာ ဒီ အစိုးရ ရဲ့ အင်မတန် ကောက်ကျစ် တဲ့ အကွက်ဆင် ဖမ်းတတ်ပုံ ဇာတ်လမ်း တစ်ချို့ ကြားခဲ့ ရတယ်။
ဒါဟာ သူတို့ ထဲ က လူရင်း နော်။
ကလိန်ကကျစ်စိတ်တွေ နဲ့ အင်မတန် ကြောက်စရာ ရွံ စရာ အာဏာဖက်တွယ်ထားမှု တွေဘဲ။
အခု ဟာကတော့ တမင်တော့ တိုက်လုပ်တာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည် အညွန့်တွေ တက်မလာနိုင်အောင် ချိုး ဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ အစိုးရ စစ်စစ် ဆိုတာ ပိုပိုပြီးပေါ်လာပါတယ်။
ဒါကို မြင်ကြ ဖို့ ကြိုးစားပြီး ဖယ်ရှားကြဖို့ ကတော့ အနာဂါတ် မြန်မာပြည် ရဲ့ ကလေး တွေ ကို တိုးတက်စေသူတိုင်း ရဲ့ တာဝန်ပါဘဲ။
မှန်ပါတယ် အရီး..။ စာရေးသူသည် စစ်အစိုးမရ ဘက်တော်သား ဖြစ်ချဉ်မှ ဖြစ်မယ်။ လိင်ကိစ္စ စည်းဘောင်မထားလိုသူ sexberal သမားလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးတွေ ခေတ်တိုင်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိပါမယ်။ ထောက်ပြချဉ်တာ စစ်တပိုင်းအစိုးမရရဲ့ ယုတ်မာပက်စက်တတ်မှုကိုပါ။ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ မကြိုးစားပဲ ပိုရှုပ်ထွေးအောင် လုပ်တာမျိုး ၈၈၈၈ အရေးအခင်းကာလမှာ ထောင်ဖွင့်ချတာ.. ဂိုထောင်ဖောက်ခွင့် ပေးပြီမှ နာမည်ဖျက်တာ တပုံတခေါင်းကြီး ရှိပါတယ်။ ခုလည်း ရိုးရိုးသားသား ရေးတယ်ပြောပြော.. ကြံရာပါပြောပြော ပွဲဆူအောင်၊ လူတွေ အာရုံလွဲအောင် တမင်လွှတ်ပေးလိုက် ပြန်ပါပြီ။ အာဏာသည် ပထမ.. အာဏာသည် ဒုတိယ ဆိုတဲ့အကောင်တွေဆိုတော့လည်း မလုပ်ရဲတာ မလုပ်ရက်တာ ဘာမှမရှိ…
ဒီလို စာမျိုး တွေက ခေတ်အဆက်ဆက် ရှိပါတယ်။
ကာမကိစ္စ ဆိုတာကလူ့မျိုးဆက် ပြန့်ပွါးဖို့ အတွက် လူ့လောကထဲ ထိပ်ပိုင်းအရေး လိုဖြစ်နေတာ ငြင်းမှမရဘဲ။
လူတွေသာ မက တိရိစ္ဆာန်တွေ၊ အပင်တွေ လဲ သူ့နည်း သူဟန် နဲ့ မျိုးပွါးကြတာ ဘဲ။
ဒီတော့ လူတွေ ကာမဆက်ဆံမှု အကြောင်း ကို စိတ်ဝင်စားတာ က သဘောဝ တရားဘဲ။ သိပ်ပြီး အဆန်းကြီး နဲ့ ပြသနာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြသနာ က ဒီမှာပါ။
“ငါ” ဟာ လူတစ်ယောက် တိရိစ္ဆာန် တွေ ထက် တော့ စား၊ ဝတ်၊ နေမှု အတွက် အသိဥာဏ်ပညာ သာ တယ် လို့ လက်ခံ ထားတဲ့ သူတိုင်း ကာမကိစ္စ မှာလဲ တိရိစ္ဆာန် တွေ ထက်တော့ သာရပါမယ်။
မဟုတ်လို့ ကတော့ ဒီ “လူ” တစ်ယောက်ဟာ “တိရိစ္ဆာန်” အသိဥာဏ်ပညာ လောက်ဘဲ ရှိတာပါ။
ဒီလို “လူ” တွေ က သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ စဉ်းစားနိုင်မှု အသိဥာဏ် တွေ “တိရိစ္ဆာန်” အဆင့်ထက် ပိုအောင် ဖြစ်နိုင်သ၍ ဝိုင်းပြီး ကူညီသင့်ပါတယ်။
ဒီလို “တိရိစ္ဆာန်” လို လူတွေ ရဲ့ စာတွေ က စကားထဲ ထည့်ပြော နေရလောက်အောင် ကိုယ် နဲ့ တန်းမညီတာမို့ ဒါတွေ ကို အရေးလုပ်ဖို့ ကိုယ့် အချိန် ကို ပေးသင့် သလား ပါဘဲ။
ကျွန်မ ဒီက စာအုပ်ဆိုင်တွေ ၊ စာကြည့်တိုက်တွေ ကို အမြဲ ရောက်ပါတယ်။
အနောက်တိုင်း ရဲ့ စာအုပ်ဆိုင် တွေ မှာတောင် မှ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်ကလွဲလို့ ဒီလို အပြာစာအုပ်တွေ မတင်ပါဘူး။
ဒီလို တိရိစ္ဆာန်သာသာ ( အောက်တန်းကျ တယ် မပြောဘူး၊ တိရိစ္ဆာန် ဆိုတာ အောက်တန်းမကျပါဘူး။ တွေးခေါ်မှု အသိပညာ မရှိသလောက် နဲရုံ ပါဘဲ) အယူအဆ စာအုပ် ကို ထုတ်ဝေခွင့်ပေးသူ / ဌာန မှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
သူတို့ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်း ရမှာပါ။
ဒီအတိုင်း လွှတ်ထား လို့ ကတော့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် မသိတဲ့ ၊ အဆင့်မြင့် တာဝန်မယူနိုင်/ မယူတတ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်သာသာသူတွေ ကြီးစိုး နေတဲ့ တိုင်းပြည် ဆိုတာ ကို ဟန်လုပ် ဖုံးဖိ မနေပါနဲ့တော့။
ဒီလိုပြောတာမို့ ကွန်ဆာဗေးတစ် လို့ ပြောလဲ အင်မတန် ဂုဏ်ယူစွာ အခေါ်ခံရဲပါကြောင်း ဆိုတာလေး။
ဒါက စာရေးသူရဲ့ ဖဘ အကောင့်။ သွားကြည့်မိပြီး မှ သူတို့ ပါးစပ်ထဲမလည်း အတော် လမ်းဟောင်းသမားဖြစ်နေလို့။
အဲဒီ လမ်းသစ်တော့ မလိုက်ပါရစေနဲ့
လမ်းဟောင်းမှာ ဆုံးတဲ့နေရာ ဆက်ထိုင်ချင်စိတ်ပေါက်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတိုင်း လမ်းဘေး မှာ ဆေးရိုး လှမ်း လို့ မရ ပါဘူး ကိုအဘဖော ရှင့်။
လွတ်လပ်စွာ ရေးခွင့် ဆိုတာ အများ ကို မထိခိုက် သ၍ ရေးပါ။
ဒါပေသည့် ၁၈နှစ် အောက် မဖတ်ရ စာတမ်းကို အကြောင်းပြပြီး ကလေးတွေ ကို ပိုပြီး ဖတ်အောင် လုပ်နေတာပါ။
ဥပဒေ မကောင်းတဲ့ နိုင်ငံမှာ၊ စည်းကမ်းမဲ့ ဟို လူတစ်မျိုး ဒီလူတစ်ဖုံ ပေးတာ ရတာ ခြင်း မတူတဲ့ နိုင်ငံ မှာ ဒီလို စည်းလွတ် ဘောင်လွတ် လုပ်နေတာ အများ ကို ထိခိုက်ပါတယ်။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီတောင် မရ သေးတဲ့၊ ဥပဒေ မကြီးစိုးသေးတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ ဒီလို လုပ်ချင် ရေးချင်တိုင်း မလုပ်ရ၊ မရေးရပါဘူး။
ဒီအတွက် ကျွန်မ ကတော့ အနာဂါတ် လူငယ်တွေ အညွန့်မတက်ခင် အညွန့်မတုံးရလေ အောင် တတ်နိုင်သ၍ ကာကွယ်မှာပါဘဲ။
ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီ ကို ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်။
စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို ကျင့်သုံးတတ်အောင် ကူညီ အားပေး ခြင်းပါ။
ကျန်​​တော်​​ပြောချင်​တာ ပါပဲအရီး ​ရေ ဒီမိုက​ရေစီ ​သားပြည့်​ဝ​နေပြီးသားတိုင်းပြည်​မှာ ဘာမဆို စည်းကမ်းတစ်​ကျ ရှိပြီးသား​ပေမဲ့ မြန်​မာပြည်​လို စည်းကမ်းဆိုတာ စာအုပ်​ထဲမှာပဲ ရှိ​သေးတဲ့ တိုင်းပြည်​မှာ လက်​ခံကျင့်​သုံးလို့မရတာ​တွေရှိတယ်​ ။ တိကျတဲ့ ဥပ​ဒေ ထိ​ရောက်​တဲ့အ​ရေးယူမှု ဆိုတာ​တွေရှိလာရင်​​တော့ ဘာမဆို သူ့သ​ဘောသူ​ဆောင်​ ၀င်​​ရောက်​နိုင်​ပါတယ်​ ။ ခုလိုကိုယ်​ခံအားနည်း​နေ​သေးတဲ့ တိုင်းပြည်​မှာ လက်​ခံဖို့ ​စောလွန်း​နေ​သေးတယ်​ ။
အရီးခင် က ဟိုဘက်က Post ကို မဖတ်ရသေးလို့ ပြောနေတာ ။
ဟိုဘက်က Post မှာ အရွယ် မရောက်သေးတဲ့ ၊
ဆင်ခြင် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု မပြည့်ဝသေးတဲ့ ကလေးသူငယ် တွေ ကိစ္စ ပြောပြီးသား ။
အဲဒီမှာ အရင် သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ဦး ။
သြဇီနိုင်ငံသားကိုဖေါရိန်း လာဖတ်သင့်ပါတယ် ။
အရီးခင် ၊ ဇီဇီ ၊နေဝန်းနီ၊ ကြောင်ကြီး၊ တို့ပြောထားတာတွေထောက်ခံပါတယ် ။
စာကြမ်းပိုးများ ဒီလို သဘောရှိလို့လေးစားပါတယ် ။
မြန်မာဟာ မြန်မာဖြစ်ကြောင်း ၊
မြန်မာ ကို တခြားမျိုးနွယ်နိုင်ငံတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်အတိုင်း ဖြစ်ရမယ်လို့ မနှိုင်းသင့်ပါဘူး ။
တစ်ခြားနိုင်ငံဖွား အနောက်တိုင်းသား တွေ မှာလဲ လူတန်းစားကွဲ ပါတယ်။
လူက လူလို အသိ နဲ့ နေတဲ့ အနောက်တိုင်းသား
လူက တိရိစ္ဆာန် အသိ နဲ့ နေတဲ့ အနောက်တိုင်းသား
တော်ကြာ ဒီလို ဟာတွေက အနောက်တိုင်းသား တွေ ဓလေ့အကျင့်စရိုက် လို့ ထင်မစိုး လို့ပါ။
တကယ်တော့ လက်တွေ့မြင်နေတာက Life Style ဆိုတာ အနောက်တိုင်းသား၊ အရှေ့တိုင်းသား၊ ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှု နေရာ ဒေသ ဘာမှ မဆိုင်ပါ။
လူ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကို ဘယ်လိုအသိနဲ့ လက်ခံ ကျင့်သုံးနိုင်လဲ ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်တွေးခေါ် နိုင်စွမ်း နဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ ပေါ်တည်ပြီး လူတွေ ရဲ့ Life Style မတူကြတာပါ။
အိမ်က ၁၀ နှစ်သား ကလေးတစ်ယောက်ကို Grand Royal တစ်ပုလင်းလောက်
သွားဝယ်ခိုင်းကြည့်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။
အမေရိကား မှာ ၁၀ နှစ်သားလေး အရက်ဝယ်လို့ ရမရ
ဆိုတော့ ဘယ်လိုပဲ ၁၈ နှစ်အောက် မဖတ်ရဆိုပြီး
၁၀ နှစ်သားလေးတွေကလည်း အားပေးမှာပါပဲ…။
၁၄ နှစ်သား က ၁၃ နှစ်သမီးကို မုဒိမ်းကျင့် ဆိုတဲ့အမှုမျိုးတွေ
ကိုဖေါ တို့ ကျွန်တော်တို့ အရွယ်ကျတော့ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်
ဒီလို တစ်တစ်ခွခွ အပြာစာအုပ်တွေကို အွန်လိုင်းမှာကြိုက်သလောက် ရနေသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်
အောင်ရင်ငြိမ်းတို့လို စာအုပ်တွေ ထွက်လာတာ
ကလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။
ကလေးတွေနဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်လို့ ရနိုင်တဲ့
ကျွန်တော် ဆိုလိုတာ မရေးနဲ့ မထုတ်နဲ့ လို့ ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးနော်…။
အလွယ်တကူ မရရှိနိုင်ဘို့ ပြောတာပါ။
စာ​ရေးဆရာကိုလည်းမသိဘူး။ဘာ​ကြောင့်​ငြင်းခုန်​​နေကြသလဲခုမှသ​ဘော​ပေါက်​တယ်​။ ကြိုက်​တဲ့သူဖတ်​လိမ့်​မယ်​။မကြိုက်​တဲ့သူမဖတ်​ဘူး​ပေါ့။ကိုယ်​က​တော့မဖတ်​မဲ့ထဲပါ ပါတယ်​။ ဘယ်​လိုအ​တွေးအ​ခေါ်နဲ့များ God is gay, God is die with HIV လို့များ​ရေးသွားပါလိမ့်​။ မယုံကြည်​​ပေမဲ့ အဲ့လို​တော့ ​စော်​​စော်​ကားကား မ​ရေးသင့်​ဘူးလို့ထင်​ပါတယ်​။
အခု လို လူတိုင်း လက် နဲ့ ကိုင် ဖတ် နိုင် တဲ့ စာအုပ်တွေ ထွက်လာ လို့ ၀ိုင်း ၀န်း တားဆီး ကြတာ လဲမှန် တယ်။
ကဲ လက်တွေ့ ကျကျ ပြော ရ မယ် ဆို ရင်
ကျနော် က အင် တာန က် ဆိုင် တော် တော်များများ ( ရောက်တဲ့ မြို့ ရောက်တဲ့ နေရာ မှာ) သုံးပါတယ်.
ဘာလို့လဲ ဆို တော့ကျနော် ဖုန်း အစုတ် 680 စီဒီ အမ်အေ က အင်တာနက်သုံး မရ လို့ ပါ။
ကိုယ်က သူများ သုံး သွားတဲ့ စက် ကို ဆက်ထိုင် တယ် ဆို ရင် ရှေ့ က လူ ဖွင့် သွားတဲ့
လိုင်းတွေ က ကိုယ်က ဆက်ဖွင့် ကြည့် လို့ ရ တာ ပါ ဘဲ။
အဲ မှာ ဘာ သွား တွေ့  လဲ ဆို တော့
အပြာရုပ်ရှင်( ဆင်ပြီး ရိုက်ထားတာရော ၊ချောင်းရိုက်ထားတာရော ၊ကိုယ်တိုင်ရိုက်တင်တာရော)
အပြာ ၀တ္တု အပြာကာ တွန်း ကား အားလုံးက ရှာစ ရာမ လို ဘဲ ကြည့် လို့ ရတယ် ဆို တာ ကို သိ လာ ရပါတယ်။
နောက်အချို လူ ငယ် အထိုင်များ တဲ့ ဆိုင်ဆို ရင် အဆင်သင့် ကြည့် နိုင်အောင် ကူးေ ပး ထား တာ ကို လဲ တွေ့ ရပါတယ်။
အဲ တော့ ကျနော် ပြော ချင် တာ အပြာ ဆန် ဆန် စာအုပ်ကတော့ အခု စထွက် လာ ပြီ။
ဒါ ကို လဲ တား ရင်မယ်။
အင် တာ နက် မှာ ကြည့် ချင် သလို ကြည့် လို့ ရနေတာ ကို လဲ ဘယ် လို တားရမယ် ဆို တာ စဉ်း စားရ မယ်။
ဲအဲ လို ခွေတွေက လဲ ခွေဆိုင် တွေမှာ တစ်ချပ်မှ ၅၀၀ ပေါ မှာ ပေါ၊
ကဲ အခု တော့ ဘယ် လို လုပ် ကြ မလဲ ။
.. ဝင် ဝေဖန်မယ်လို့ စဉ်းစားလိုက်တော့ ခေါင်းထဲဝင်လာတာက for what sake? .. ဘယ်သူအကျိုးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီး ပြောရမှာတုံးပေါ့.. လူငယ်တွေအတွက်လား၊ စာပေလောက အတွက်လား၊ စာဖတ်သူအတွက်လား၊ ယဉ်ကျေးမူအတွက်လား၊ တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့် အတွက်လား.. စသည်ပေါ့.. အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီး အမြင်တွေကွဲမယ်ထင်ပါတယ်.. စဉ်းစားမိသလောက် တစ်ခုချင်းအတွက်ပြောရရင်
၁. လူငယ်တွေအတွက် အဆိပ်သင့်မှုဆိုရင်တော့ အသည်းအသန် ဆွေးနွေးရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ဘူးထင်တယ်.. ဘာလို့လဲဆို ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အရက်၊ဆေးလိပ်၊ကွမ်း၊ဆေး စတာတွေတောင် ကောင်းကောင်းမထိန်းချုပ်နိုင်တာ အသိသာကြီး.. လိင်ကိစ္စဆိုလည်း နေရာဒေသ ပတ်ဝန်းကျင်အလိုက် ထိန်းလို့ မရတဲ့ အပိုင်းတွေရှိတယ် (တချို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းများနဲ့ နီးတဲ့ သူငယ်ချင်းဆေးခန်းတွေဆို ကိုယ်ဝန် တားပေးရတာတွေ၊ ဖျက်ချဖို့လာပြကြတာတွေ၊ ဘာညာပေါ့).. ဒီလိုစာအုပ်ထက်ပို ဟဲဗီးဖြစ်မယ့် media မျိုးစုံကလည်း အလွယ်တကူရနေတော့ သိပ်မထူးလှဘူးထင်တယ်.. စာအုပ်ကို ထောက်ခံနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ သိပ်မထူးလှဘူးလို့ ထင်တာပါ.. ၁၈+ အရာတွေကို ၁၈ အောက်တွေ လက်လှမ်းမမှီအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ ကအရင်ဖြစ်ရမယ်ထင်တယ်..
၂. စာပေလောက အတွက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်နိုင်ငံစံချိန်နဲ့ပြောရရင် တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးထားခံရတာ မျက်ခုံးပင့်စရာကြီးပဲ.. တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဒါမျိုးခွင့်ပြုတာ ပြုတာတပိုင်းပေါ့နော.. တချိန်ချိန်တော့ ဖြစ်လာမှာ အမှန်ပေမယ့် အခုချိန်ကတော့ စာကောင်းပေကောင်းတွေတောင် အရောင်းရမတွင်ကျယ်တဲ့ အချိန် ဒီစာအုပ်တွေ ရောင်းကောင်းနေရင်တော့ အကျိုးပြုစာရေးဆရာတွေကို မျက်နှာပူစရာ.. တလွဲဆံပင်ကောင်း မဖြစ်သင့်သေးဘူးပေါ့.. သူလိုင်းနဲ့သူ ဖွံဖြိုးပြီးသွားတဲ့ အချိန်ဆိုရင်တော့ နေရာတစ်ခုပေးထားလည်း ကန့်ကွက်ဖို့မလိုဘူးထင်ပါတယ်.. ကြိုက်တဲ့သူကြိုက်တဲ့လိုင်းဖတ်ကြပေါ့…
၃. စာဖတ်သူတွေအတွက် ဆိုရင်တော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး.. ကိုယ်ကြိုက်ရင်ဖတ် မကြိုက်ရင်မဖတ်နဲ့ပေါ့..
၄. ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ဆိုရင်တော့ ညှိကုန်ပြီ.. လိင်ကိစ္စဆိုတာ သဘာဝပဲ ညစ်ပတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုသော်လည်း သိသာသိစေ ဆိုတဲ့ အပိုင်းလေးတွေကရှိတယ်.. ကွန်ဇာဗေးတစ်ဖြစ်ဖြစ် လစ်ဘရယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူများစု လက်ခံထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို လက်ခံရမှာလေးတွေရှိသင့်တယ်.. ဥပမာ ဖော်ရိမ်နာ လင်မယား နှစ်ယောက် မြန်မာပြည်မြို့လည်ထဲမှာ နမ်းနေရင် မသင့်ဘူးဆိုပါတော့.. လိင်ကိစ္စလူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်သည်ဆိုသော်ငြား၊ အပြာစာအုပ်များ အရင်ကတည်းက ရှိနေပါတယ်ဆိုသော်ငြား၊ တရားဝင် ရေးသားတာရယ်၊ ထုပ်ဝေခွင့်ပြုတာရယ်က ယဉ်ကျေးမူနဲ့ညိုပါတယ်.. လူများစုရဲ့ ယဉ်ကျေးမူအမြင် တဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလာတဲ့ အချိန်ကြတော့ တမျိုးပေါ့..
၅. တစ်ဦးချင်းလွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ဆိုရင်တော့ စာရေးသူလည်းသူ့လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့သူ ရေးခွင့်ရှိတယ်မှတ်တယ်.. စာပေခွင့်ပြုရေးက ခွင့်ပြုရင်တရားဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့.. ခွင့်မပြုရင်ခိုးထုတ်ချင်ထုတ်ပေါ့.. ဥပဒေနဲ့ညှိလို့ဖမ်းလည်းခံလိုက်ပေါ့၊ ဒါကသူ့အပိုင်း.. သူရေးသားတာ တာဝန်မဲ့တယ်၊ စာပေအဆိပ်သင့်တယ်လို့ယူဆရင် ဝေဖန်တဲ့လူကလည်း သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ဝေဖန်လို့ရတာပဲ.. ၁၈ နှစ်ပြည့်သူများကလည်း ကြိုက်ရင်ဝယ်ဖတ်ပေါ့.. မကြိုက်ရင်၊ မတိုးဖူးထင်ရင် မဖတ်နဲ့ပေါ့.. ဒါရှိတာပဲ..
ဒါက ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ဝယ်ခွင့်ရသွားတာဘဲ ပြောင်းလဲသွားတာပါ တကယ်တောဒီလိုအပြာရောင် စာအုပ်မျိုးတွေ အခွေတွေက ဒုနဲ့ဒေး ခေတ်အဆက်ကတည်းက ရှိခဲ့ပြီးမို့ အထူးအဆန်းတော့ မဟုတ်ဘူးရယ်။
အမှန်က ဒီလိုစာအုပ်တွေ မရေးနဲ့မဖတ်နဲ့ ထုတ်ဝေခွင့်မပြုနဲ့လို တားနေ ပြောနေလည်း ရမည်မထင်ပါ ပေါ်တင်အလွယ်ရခြင်း မရခြင်း ဘဲကွာမှာပါ။
တကယ်လုပ်သင့်တာက ဒို့တိုင်းပြည်က လူငယ်တွေရဲ့ အတွေး အခေါ် အယူအဆ တွေကို မြှင့်တင်နိုင်တဲ့ ပညာပေးမှုတွေ များများလုပ်သင့်တာပါဘဲ။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် အဲလို လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်စွမ်းအင် အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေကို သူများတိုင်းပြည်လို အစိုးရက လုပ်ပေးမှာတော့ မဟုတ်ဘူး ။ သူကတော့ ၂၀၁၅ နီးလာလေလေ အဖက်ဖက်က ကြိုးတွေရှုပ်သည်ထက်ရှုပ်အောင်လုပ်လာလေလေပါဘဲ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ်ဘဲစောင့်ရှောက်ပြုပြင်ကြပါလို့။
ွှထိုစာရေးဆရာကို ပြည်ထဲရေးက ညစ်ညမ်းစာပေရေးသားဖြန့်ဝေမှုနဲ့ တရားစွဲဖို့ စတင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ သတင်းကြားလေရဲ့ဗျာ။
ကျုပ်တော့ ဒီလိုညစ်ညမ်းစာပေကို တရားဝင်ထုတ်ခွင့်မပြုသင့်ဟုယူဆပါသည်
စာကြမ်းပိုး(၃) ပြောသည် နှင့် တစ်သဘောတည်းရှိပါသည်။
ကိုဘလက်ချောပြောတာလည်း စဉ်းစားသင့်ကြပါသည်…မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု ဇီးရိုး အခြေနေမို့ပါ။
.ကျုပ်လာတာ အတော်နောက်ကျနေပြီကိုး …..
.အဲတော့ကာ အပေါ်က မိတ်ဆွေများက ပညာတတ်များပီပီ ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့် သာယာညှင်းပြောင်း ဆွေးနွေးသွားကြပြီဆိုတော့-
.ကျုပ်အလှည့်မှာတော့ ဒုတ်ထိုးအိုးပေါက် ပြောချင်ရာပြောတော့တာကောင်းတယ်….
.ဒီမှာ ဆွေ။နွေးကြတဲ့ အကြောင်းအရာက ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆိုတော့
.ကျုပ်လေသံလေး ကြမ်းရင် ရိုင်းရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ကြဗျာ-
(မဖတ်ချင်မဖတ်နဲ့ပေါ့) လို့တော့ မပြောပါဘူး… အဟတ်ဟတ်…
.၁။ ဒီစာအုပ်မျိုး စာအုပ်ဆိုင်ပေါ် တရားဝင်ရောက်လာတာ လက်တွေ့မှာ ဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေရှိမလဲ…. ?
.လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ဆုံးရှုံးပါတော့မယ်။
.မိဘတွေက စာအုပ်ဆိုင်ဝင်တဲ့ ကလေးတွေ သူတို့ဝယ်လာတဲ့ စာအုပ်တွေကို စောင့်ကြည့်(ရ)ပါတော့မယ်
.မိဘ အုပ်ထိန်းမှု့က လွတ်တဲ့ အရွယ်တွေအတွက်တော့ ဒီစာမျိုးတွေက စာပေအဖြစ်တင်မက မီဒီယာအသွင်မျိုးစုံနဲ့ အရမ်းကို .အလွယ်တကူရနိုင်နေတာပါ။ အဲဒီအရွယ်တွေအတွက် ဘာမှမထူးပါဘူး…။
.ဒီစာမျိုးရေးစားတဲ့ ကောင်စားမျိုးတွေအတွက်တော့ မြောင်းထဲကနေ အိမ်ဦးခန်းရောက်လာတာမို့
.အဲသလို စာရေးသူတွေ အများအပြားပေါ်လာပြီး
.လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာ မိမိရဲ့လွတ်လပ်မှု့က သူတပါးကို မထိခိုက်ဖို့တော့ လိုပါတယ်
.အဲဒါဟာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ရဲ့ အခြေခံပါ….။
.ဒီနိုင်ငံမှာ sex ဆိုတာ ထမင်းစားရေသောက်ကိစ္စမဖြစ်သေးပါဘူး။
. ဖြစ်ချင်သူများရှိရင်လဲ ခဏစောင့်ကြပါဦး…။ သိပ်မလောပါနဲ့…။
.ထမင်းစားရေသောက် ရိုးအီနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တဲ့အတွက် အဲဒါကို စွဲလမ်းတတ်ပါတယ်။
.အဲဒါမျိုးချည်း အာရုံရောက်နေတတ်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ထိခိုက်ပါတယ်။
.တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေတဲ့စာမျိုးကို စာပေလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်အကာအကွယ်မပေးထိုက်ပါဘူး…။
၃။ မဖတ်ချင် မဖတ်နဲ့ပေါ့
အဲဒါက ပြသနာ ….
အခုကိစ္စက လူကြီးတွေ အတွက်မဟုတ်ဘူး
လူကြီးကတော့ မျက်စေ့အညောင်းခံပြီး ဖတ်ချင်မလားဗျ ..
လိင်ဖျော်ဖြေတဲ့နေရာတွေကို ကိုယ်တိုင် သွားတော့မပေါ့..
ကျုပ်တို့နိုင်ငံလောက် ဖါခန်းပေါတဲ့နိုင်ငံ ရှိမယ်တောင်မထင်ဘူး….။
သူတို့ ဖတ်ချင်သည်ဖြစ်စေ မဖတ်ချင်သည်ဖြစ်စေ
ဖတ်သင့်မဖတ်သင့်ကို လူကြီးက ဆုံးဖြတ်ပြီး သတ်မှတ်ပေးရမှာ
အဲဒါလဲ လိင်မှု့ကိစ္စက မကောင်းတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဘူး
ကလေးသူငယ် လူငယ်တွေအတွက် အချိန်မတန်သေးလို့
၄။ ၁၈+ ဆိုပြီး rating သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ
အဟတ်…. ဟတ်…. ဟတ်…..
အဲဒါကြီးက ဒီနိုင်ငံမှာ ဘာသောက်သုံးကျမှာမှတ်လို့…..
ကျုပ်က မော်ဖင်းတွေ မှန်ဘီရိုထဲထည့်ပြီးရောင်းမယ်……
ဆိုင်းဘုတ်တွေ စတစ်ကာတွေ ရုပ်သံတွေ လက်ကမ်းစာစောင်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့
မော်ဖင်းသည် ဆေးဝါးအဖြစ် လိုအပ်သောအခြေအနေတွင် တိကျသော အတိုင်းအတာဖြင့်သာ သုံးစွဲရန်ဖြစ်သည်။
မော်ဖင်းကိုသုံးစွဲတိုင်း လက်မှတ်ရ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ ကြီးကြပ်မှု့ဖြင့် သာသုံးစွဲရမည်။
မော်ဖင်းသည် စွဲလန်းတတ်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအဖြစ် လုံးဝမသုံးစွဲရ။
အဲသည် သတိပေးချက်ကို – လာဝယ်တဲ့သူတွေကို အလွတ်ရွတ်ခိုင်းပြီး အလွတ်ပြောနိုင်မှ ရောင်းမယ်ဗျာ….။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘိန်းစားတွေ စာကျက်သံနဲ့ကို ခင်ဗျားတို့ အိပ်လို့တောင်ရမယ်မထင်ဘူး….။
ဆိုလိုတာက သတိပေးတယ်ဆိုတာ နည်းစံနစ်တကျ အကောင်အထည်မဖေါ်နိုင်ရင် အာပတ်လွတ်ဝိနည်းရှောင်တာမျိုးပဲဖြစ်မှာ ……
ခင်ဗျားတို့ RATING က ၁၈+ မကလို့ ၈၀+ ဖြစ်နေဦးတော့ ….
ဒီနိုင်ငံမှာ ဘယ်သူမှ အရေးမစိုက် အရေးမထား အရးမယူပါဘူး….. လို့ ….
၅။ အဲဒီတော့ ဒီစာမျိုး စာပေပုံစံတစ်ခုအဖြစ် ရေးသားထုတ်ဝေလာတာကို ဘာလုပ်မှာလဲ …. ???
ဒီပိုစ့်မှာလိုပဲ ၀ိုင်းဘေရမှာပေါ့ …..
မြောင်းနဲ့တန်တဲ့ကောင်တွေကို မြောင်းထဲပို့ရမှာပေါ့ ….။
ခင်ဗျားတို့ရပ်ကွက်ထဲ ခွေးရူးဝင်လာရင် ဘာလုပ်လဲ ….၊၊၊
ခွေးရူးဝင်ရင်တော့ ၀ိုင်းရိုက်တာပဲလေ မသေမချင်း
ဘာသာရေး ၊ လူမှုရေး ၊ လူမျိုးရေး ၊ စီးပွားရေး ရှိရှိသမျှ အရေးတို့ရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ် ပညာရေးမှာ တခြမ်းပဲ သုံးခဲ့တဲ့ ဦးနှောက်တွေရဲ့ အစွန်းရောက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ။
ဘာသာရေးမှာလည်း ပလူပျံ တယ်
အတွေးအခေါ်တွေ အောက်တန်းကျလာတာကို အတွေးအခေါ်နဲ့ပဲ ပြန်ဆွဲတင်မှ ရမယ်။
ရပ်ရွာထဲကို ခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုရော ဘာလုပ်သင့်လဲ
ခွေးရူးအားကိုးပဆိန်ရိုး
ဏှာ ဆိုးဝါဒ များအားဆန့်ကျင်ကြ
ရဲတွေ ခင်ဗျားတို့ အလုပ် လုပ်သင့်ပြီ
ဘာမဟုတ်တဲ့ အပြာစာတွေရေးတဲ့ကောင်ကိုတောင်မဖမ်းရဲ ရင်
ရဲ လုပ်မနေနဲ့ …
စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တွေ၊ ခံယူချက်တွေ၊ နားလည်မှုတွေ ခဏဖယ်ထားဗျာ..ခပ်ပြတ်ပြတ်တွေးရင် ကောင်းတယ်..မကောင်းဘူး. နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်. ကျန်တာတွေက ဆင်ခြေကောင်းကောင်းရှိရင် ဒီအတိုင်းကြည့်နေရမှာပဲ.. ဆိုးတဲ့အရာကိုတရားဝင်အောင်လုပ်တာလည်းလူပဲ.. ကောင်းတာကို ဖယ်ထုတ်တာလည်းလူပဲဆိုတော့ သတ်မှတ်ချက်ကို လက်ကိုင်ထားပြီး အမှား၊ အမှန်ပြောလို့မရဘူး..ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်လက်ကိုင်ထားပြီး ခပ်ပြတ်ပြတ်ပြောရရင်..လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးဟာ အရှက်ကင်းမဲ့ပြီး ဒီလိုစာပေတွေဟာ ထမင်းစားရေသောက်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ဒီကိစ္စဟာ မှန်သွားပြီလို့ ဘယ်တော့မှ မထင်ချင်ဘူး..အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် အကျိုးဆက်ဆိုးမယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စ ဟာ ကန့်ကွက်ရမယ့် အရာဖြစ်သွားပါပြီ..ဥပမာထပ်ပြောပါ့မယ်..လူညီရင် ဤ ကို ကျွဲ လို့ဖတ်လို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်..ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဤ ဟာ ဘယ်တော့မှ ကျွဲ မဟုတ်ပါဘူး..ဒါကြောင့် ခေတ်ကာလအခြေအနေအရ မလွဲမသွေလက်ခံကောင်းလက်ခံရမယ့်အချိန်ရောက်လာနိုင်ပေမယ့် ( ဒီလိုလက်ခံလိုက်ရုံနဲ့တော့) ဒါဟာဖြင့် မှန်ပါတယ်လို့ ဘယ်တော့မှ လက်မခံပါဘူး.. အချိန်မရလို့ ခပ်တိုတိုပဲ ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်..
ဒီ စာအုပ်ကို မဝေဖန်ခင် အဲဒီစာအုပ်ရေးသူရဲ့ အမေ ဒါမှမဟုတ် မိန်းမ ဒါမှမဟုတ် ညီမ ဒါမှမဟုတ် သမီး ဆိုသူတို့ရဲ့ အဲဒိစာအုပ်အပေါ် ထားတဲအမြင်ကို သိရရင် အရမ်းကောင်းမယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူဟာ တကိုယ်ရေတကာယ သမားဆိုရင်တော့ ဘာမှ ဆက်ပြောစရာမရှိ တော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်မှာ တော်တော်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း အသိ တစ်ယောက်ရှိတယ် အမေက ငယ်ငယ်ကတဲကဆုံးသွားပြီး အဖေ သဘောင်္သား ကလဲနောက် အိမ်ထောင်မပြုပဲ ညီအကို နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲတော့ သူဟာ လူပျိုပေါက် ကထဲက Sex ကိစ္စကို စည်းလျွတ် ဘောင်လျွတ် ကို ဝါသနာပါပါ လိုက်စားတာ ( ပြောရရင် အပျို အအို သူများမယားပါ မရှောင့်ပါဘူး) ။ ကျွန်တော်တို့က ဒီကိစ္စက မသင်တော်ဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင်လဲက ဒီကိစ္စက ရှက်စရာမှ မဟုတ်တာလို့ပြောပါတယ် နောက်ပြီး သူလိုလို့ ကိုဖြည့်တာ ဘာငရဲမှ မကြီးပါဘူး ဆိုတာ သူ့လက်သုံး စကား။ သူ အိမ်ထောင်ကြလို့ မွေးလာတာ သမီးကြီးပဲ နှစ်ယောက် အခု တယောက်က အပျိုပေါက်တောင် ဖြစ်နေပြီ ကျွန်တော်တို့ ကတခါတလေ ခင်လို့ သူ့သမီး တွေနဲ့ နောက်ရင်တောင် ဒေါ်သ တော်တော် ထွတ်တတ်နေပြီ။ အဲဒါ ဘာကို ပြတာလဲ ဆိုရင် လူဟာ သူ့ရဲ့ သွေးသားနီးတဲ့ အနီးဆုံးလူ ထဲမှာ မိန်းခလေး ဆိုတဲ့ ခံဘက်ကမရှိ မချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ တတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ လူဆိုတာ သွေးနဲသားနဲ့ တည်ဆောက်ထား တာကြောင့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိပဲ စိတ်ရှိတိုင်း စည်းလျွတ်ဝါးလျွတ် တာလုပ်ကြကြေးဆို ဒီလောက မှာ လင်ကောင်မပေါ်ပဲ မွေးတဲ့ကလေးတွေ ထားစရာနေရာ တောင်ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
အပြာရောင်စကားဝိုင်းဆိုလို့.. ကျော်ထားမိတာ.. အခုမှဖတ်ဖြစ်တယ်..။
အသက်မပြည့်သူတွေလည်း… ဆဲလ်ဖုံးလေးတွေကိုယ်စီနဲ့.. ဒေါင်းချင်သလောက်ဒေါင်းလို့ရနေတဲ့..ခေတ်ကြီးဆိုတော့ကာ…
ကျုပ်သဘောဆိုရရင်တော့.. ဒါကပါးပါးလေးပဲရှိပါသေးတယ်…. လို့..။
အခုလို..လှိုင်းပြာဝင်လာတာကို.. အကြောင်းပြပြီး.. လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ကို ..ပိတ်ပင်မှသာ.. ထိပါးမှသာ.. ပိတ်တဲ့သူ.. ကမ္ဘာ့ရာဇ၀တ်မှုမြောက်ကျုးလွန်တာပါလို့..။
အခုလို အပြာလွှမ်းစာရေးတဲ့အတွက်လည်း..စာရေးသူကိုလွတ်လပ်စွာ..ဆဲနိုင်.. ပြောနိုင်ခွင့်ရှိရ..ရှိသင့်ပါတယ်လို့..။
အခုလိုပြန်လှန်မပြောရလုပ်မှသာ.. ဒီမိုကရေစီကိုထိခိုက်တာပါ… လို့..။
freedom of speech ကို အားရပါးရ အော်ခဲ့ဖူးသမို့
ပြီးတော့ မဟုတ်လဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပျံ့နေတာမို့ မှတ်ချက်ချချင်စိတ်တောင် မရှိပါဘူးဗျာ။
ဒီလို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ထွက်လာတာကို လုံးဝ (လုံးဝ) သဘောမတူ။
သူ့ဟာသူ စက်ကွင်းလွတ်အောင် ဘယ်လောက်ပဲ ရေးထားထား ဆယ်နှစ်ကလေးတောင် အရက်ဝယ်လို့ရနေတဲ့ဆီမို့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်တာက သိသာနေတယ်။
Rule of law ကို တိတိကျကျ မလုပ်နိုင်သေးဘဲနဲ့၊ ထိန်းချုပ်နိုင်မှု မရှိသေးဘဲနဲ့ ဒီစာအုပ်တွေ ထွက်လာတာကို ဘယ်အကြောင်းပြချက်နဲ့မှ လက်ခံပေးစရာ မရှိ။
ဒါဟာ လွပ်လပ်ခွင့်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်ချင်ပါတယ်။
ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ နာမည်တပ်မယ်ဆိုရင်လဲ ကျေကျေနပ်နပ် လက်ခံလျက်….
-အေပေး ခွေးမသား အောင်ရင်ငြိမ်း၊
ခလေးတွေ ပညာရေး စုတ်ပြတ်နေပါတယ်ဆိုမှ ဒင်းကတစ်မျိုး။
သူကြီးမင်း အပြောမြင်လိုက်ရတာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို သိပ်မဟန်ဘူး။
ဒီမိုကရေစီ ကို ဆင်စမ်းသလို မငြင်းချင်တာမို့ “ဖတ်စာ” ကိုင်ပြီး ပြန်ထွက်လာပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာ ရဲ့
“အခြေခံသဘော (၈) – လူအများစုမှ ပြဌာန်းသည့် ဥပဒေ ကို မကြိုက်သော်လည်း လိုက်နာရမည်။”
အကယ်၍တိုင်းသူပြည်သားအချို့က ဝင်ငွေခွန်ကဲ့သို့ ဥပဒေမျိုးကို လိုက်နာစရာမလို ခဲ့ လျှင် ကျန်တိုင်းသူပြည်သားများသည် ဝင်ငွေခွန်ပိုဆောင်း၍ အစားထိုး ပေးကြရပါလိမ့် မည်။
ထိုသို့အပိုဆောင်းပေးရခြင်းသည် မတရားမှုဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက် ကသာ “ငါ့ကားကို လိုင်စင် မလုပ်ချင်လို့ လိုင်စင် မလုပ်ဘူးကွာ” ဆိုလျှင်ရော။
လူတစ်ယောက်က ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ ပိုက်ဆံများကို အလစ်သုတ်ပြီး လိုင်စင်နံပါတ် မရှိ သောကား နှင့် ထွက်ပြေးကောင်းပြေးနိုင်သည်။
လိုင်စင်လုပ်မထားသောကားကို ရဲဌာနမှ လည်း ရှာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြသနာတွေ အများကြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်တစ်ခုတွင် “လူတိုင်း” ဥပဒေကို လိုက်နာကြရပါသည်။
လူအများစု၏ မဲဆန္ဒ ဖြင့် ဥပဒေတစ်ခုကို ပြဌာန်းထားခဲ့လျှင် ပြည်သူတိုင်းက လိုက်နာကြရပါမည်။
အကယ်၍ လူအချို့ကိုဥပဒေ မလိုက်နာခွင့်သာပေးခဲ့ပါလျှင် ဥပဒေကို လိုက်နာရန်လိုသူ များနှင့်ဥပဒေကိုလိုက်နာရန် မလိုသူများကို ခွဲခြားမှတ်သားထားရန် အလွန်ခက်ပါလိမ့်မည်။
ဥပဒေများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံး၏ ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်လိုပါက “ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာ” ပါ။ ကြော်ငြာ ဝင်ပါသည်။ ဖတ်ကြပါ။
ဒီမိုကရေစီ ဖတ်စာ (အစ မှ အဆုံး) PDF Format
သူကြီး http://mandalaytube.com က ဝင်မရလို့။
ဤ ဖတ်စာ ကြည့်ပါ။
(ဥပဒေများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံး၏ ကောင်းကျိုးအတွက်ဖြစ်ပါသည်)
ကျွန်မ မြန်မာပြည်အကျိုးစီးပွါး တိုးတက်မှု ကို လိုလားသူ ပြည်သူ တစ်ဦး အနေနဲ့ ဆန္ဒပြုခွင့် ရလျှင် ပြုလိုပါသည်။
“၁၈အောက်ဟု သတ်မှတ်ထားသော စာအုပ်များ ကို အများပြည်သူများ အတွက် ဖြန့်ဖြူးးထုတ်ဝေခွင့်မပေးရန်” ဥပဒေ
“ကလေးသူငယ်များ စီးကရက် အရက်သေစာ” သောက်ခွင့်မပြုသည့် ဥပဒေ
(မယုံမရှိပါနဲ့။ ဒီမှာ အဲဒီ ဥပဒေရှိပါတယ်၊ လူကြီးတွေ တောင် လူများရာ နေရာတွေမှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရပါ)
စသဖြင့် ကလေးတွေကို ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စိတ်ဓာတ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး ပျက်ပြားစေတဲ့ အကြောင်းတွေကနေ အကာအကွယ်ပေးမဲ့ ဥပဒေများ ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။
တကယ်ဘဲ လူညီရင် ဥပဒေပြု လို့ ရရပါမယ်။
အများက ကျွန်မ တင်တဲ့ ဒီလို ဥပဒေပြုရန်အဆိုကို ကန့်ကွက်သည် ဆိုပါစို့။
သူတို့ အများရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ထုတ်ဝေခွင့်ရတဲ့ စာအုပ်တွေ ကို အများရှေ့ ရောက်နေတာ ကျွန်မ လက်ခံဖို့လဲ ဝန်မလေးပါ။
ကိုယ့်သားသမီး အတွက် ကိုယ်ဟာကိုယ် တတ်စွမ်းသ၍ ကာကွယ်ဖို့ဘဲ ရှိပါတယ်။
မိုင် ၃၀မောင်းရန်လမ်း ကို မိုင်၄၀မောင်းလို့ မရတာ အသိပါ။
အဲဒီလို ဖြေးဖြေးမောင်းရမှာ ကို မမောင်းကြလို့၊ အန္တရာယ်ဖြစ်ခဲ့လို့၊ ဖြစ်လာမှာမို့ ဥပဒေ သတ်မှတ်ထားရခြင်းပါ။
အလကား တော့ မဟုတ်။
ဒါ့အပြင် ကလေးတွေ သွားတာများလာတဲ့ အခါ ဒါကို မိုင် ၂၀ နဲ့ လဲ ပြီး ဥပဒေ ပြင်ရန် တောင်းဆိုခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အများအတွက် အကျိုးများတဲ့ ဥပဒေပြနိုင်ဖို့ လူတိုင်းလူတိုင်း မှာ တာဝန် ရှိတယ် ဆိုတာလေး သတိရှိနေကြဖို့ပါ။
ဟိုဘက်မှာ မပြုံး ဖြစ်စေချင်တဲ့ “မယားပြိုင် ဥပဒေ” ဖျက်ပြီး “တစ်လင်တစ်မယား ဥပဒေ” အတွက်လဲ ကျွန်မ သဘောညီပါတယ်။
ဥပဒေ ဖြစ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကူညီပါမယ်။
ဒီလို ကိုယ့် (တနည်း) အများဆန္ဒ တွေ အကောင်အထည် ပေါ်လာနိုင်ဖို့ တိုင်းပြည်ကို စေတနာ ရှိသူ စွမ်းအားရှိသူ ရဲ့ လက်ထဲ ဥပဒေပြုခွင့် အာဏာ ရောက်အောင် သာ ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကြပါ လို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
(ဪ ဒီ အရီးတော့ ဇွတ်ကြီး ဘာဘဲပြောပြော နောက်ဆုံး ဒီဘူတာဘဲ ဆိုက်တော့တာဘဲ )
လောလောဆယ် မှာတော့ ထိုအပြာစာအုပ် ကို ရေးခဲ့သူ ကို ထောင်ထဲပို့ ရန်မလိုပါ။
သူတို့ကတော့ ကိုယ့်အကျိုးဘဲ သာမာန်မြင်ပြီး ရေးမှာဘဲ။
တော်ကြာ အမှု တစ်ခုခု ဖြစ်သွားလို့ ရွာကလူတွေ ပယောဂမကင်းဖြစ်တော့မယ်။
ဒါကို အများရှေ့ ပို့သင့်မသင့်၊ အများမှာ အဆိပ်ဖြစ်မဖြစ် သိဖို့ တားဖို့က သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ ရဲ့ တာဝန် သာဖြစ်ပါကြောင်း။
ကိုယ့် အနာဂါတ်ရင်သွေး တွေ အဆိပ်သင့်မှာ ကို ကာကွယ်ရမှာလဲ တိုင်းပြည်ထဲရှိ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း ရဲ့ တာဝန်ဖြစ်ပါကြောင်း။
၁။ မြန်မာပြည်မယ် ဥပဒေရှိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။ ဥပဒေမယ် ချွင်းချက်မရှိသင့်..မြန်မာများ ဥပဒေလိုက်နာမှုအားနည်းသေးသောကြောင့် (ဟုဆိုကာ) ဥပဒေတခုထပ်ပြု ခြင်း.. လူအုပ်စုနှင့်ဖိခြင်း မဖြစ်သင့်….
( အမေရိကားတွင်အမေရိကန်များ လိုက်နာလုပ်နိုင်သည်များကို မြန်မာပြည်ဝယ်.. မြန်မာများလည်း လုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရမည်..
၂။ လူအများစုတွန်အားဖိအားကြောင့် ဥပဒေမဏ္ဍိုင်ယိုင်ပြီး တရားရေးကပါ ဘက်လိုက်ပါလျှင်.. ပိုမိုဆိုးဝါးသော အခြေအနေကို လုအများစုကတွန်းပို့နေပြီဟု.. ဟူလို..
Inademocracy, the people get the government they deserve. – Alexis de Tocqueville
လူလယ်ခေါင်မှာ ဆေးလိပ် မသောက်ရဆိုတဲ့ ဥပဒေက ရှိပီးသားဆိုတော့ ဘယ်လိုမျိုးလဲဟင်….
အရီး နဲနဲလေး အကျယ်သိရင် အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ပြောပြပါလားဟင်…
ရှိတယ်ဆိုတာ အခုမှ ကြားဖူးလို့ ပါ….
သူကြီးနဲ့ အရီး ​ရေ ခင်​ဗျားတို့ နှစ်​​ယောက်​ ၂၀၁၅ မှာ လွှတ်​​တော်​ထဲ ၀င်​ထိုင်​သင့်​ပြီ
အဲဒီလို မဖတ်ဖြစ်ဖို့ အတွက် အစိုးရက ဥပဒေ နှင့် ကာကွယ်ပေးရမယ် ။ ”
အမှန်တော့လေ အဲလို တစ်တစ်ခွခွတွေ မပါပဲ စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ရေးလို့ ရတဲ့ဟာကို …. :mrgreenn:
သူ မို့ မြေအောက် စာပေ ပုံစံကို မြေပေါ်တင်လာရဲတယ်။
ဒီလို အကြမ်းပတမ်းတွေမပါပဲ ရေးလိုရာကို မျက်စိထဲ ပေါ်လာအောင် ရေးတဲ့ နည်း အနော့ မောင်လေး ဂီ ဆီမှာ သင်တန်းတက်လိုက်ပါအူးးးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အနော့ မောင်လေး အရေးအသား ပိုင်နိုင်ကြောင်းကို ဖြင့် ထမင်းစား ပို့(စ) နဲ့ ခြေသည်းညှပ် ပို့(စ) တွေမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အနော်တို့ ဝါးတို့ အနစ်နာခံပြီး မင်းသမီး အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ ပို့(စ) တွေပါ။
ခရက်ဒစ် တူ MrMaung KoThet
မြန်မာပြည်နဲ့ နိုင်ငံတကာစံချိန်ကို ချိန်ထိုးမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ၂ခုဟာ တန်းညီလားဆိုတာကို အရင်မေးခွန်းထုတ် စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ စင်ကာပူမှာ အရက်ဆေးလိပ်စတာတွေကို ဝယ်ယူဖို့ အနိုမ့်ဆုံး အသက်ရှိပါတယ်။
barတွေ night club စတဲ့ ကလပ်တွေကို ဝင်ဖို့ဆိုတာလည်း အသက်ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
အသက်မပြည့်သေးသူကို မုဒိန်းကျင့်မိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် (molest) လုပ်မိရင်တော့ ကြိမ်ဒဏ်ရောထောင် ဒဏ်ရောတွဲလာပါလိမ့်မယ်။
secondaryလောက်ရောက်ရင်ပဲ ကျောင်းတွေမှာ sex educationကို တရားဝင် ပညာပေး သင်ပေးနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံလို အဲ့သလို သတ်မှတ်ချက်တွေမရှိသေး၊ ကန့်သတ်ချက်တွေမရှိသေး၊ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမူတွေမရှိသေးတဲ့ နိုင်ငံတခုမှာ………
အဲ့သလို အထူးသဖြင့် လူငယ်တွေကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စာပေတွေကို NC18လို့တပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဖြန့်ဝေလို့ ရပြီဆိုရင်တော့ မှားနေပြီလိုပဲပြောပါရစေ။
တရွက် နှစ်ရွက်လှန်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မဖတ်သင့်တော့ဘူး။
ချပ်ပတာ တခု နှစ်ခုလောက်ဖတ်ပြီးတာနဲ့
(စာတအုပ်လုံး၊ စာတပုဒ်လုံးကို ဖတ်စရာမလိုပဲ စာဖတ်သာနာခဲ့ရင် စာရေးသူရဲ့စေတနာကို ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်)
စာရေးဆရာ နေနော် ၏ သဘောထား >>>
တစ်ခုစဉ်းစားမိတာ စာရေးသူဟာ သူ့ကလောင်နာမည်နဲ့ လူတောတိုးရဲသလားဆိုတာကို…..:roll: